Maitiro ekutumira mafaera mahombe kuburikidza neMail Drop | IPhone nhau
Maitiro ekutumira makuru mafaera kuburikidza neMail Kudonha
Mail Kudonhedza yakaita kuonekera kumusangano wevanogadzira muna 2014 uye yakamhara yakabatana naJosemite paMacs. Asi kudzamara kusvika kweiyo vhezheni yeIOS 9.2 yanga isati yavepo yekuishandisa kubva kune yedu iPad, iPhone kana iPod Touch.
Kubva panguva yekuve chikamu, kana zvasvika pakutumira makuru mafaera, tinoshandisa gore, uchivaisa uye vozotumira chinongedzo kumugashiri kuitira kuti vagokwanisa kuchirodha pasi kana vachichigamuchira, nekuti havangambosvika neemail kana server yapunzika uye ichivhara kurodha kwemamwe mameseji.
Mail Kudonhedza inotibvumidza kutumira mafaera anosvika ku5 GB muhukuru kuburikidza neApple gore. Iko mashandiro akareruka kupfuura maitiro atanga tichiita kusvika parizvino nekuaisa kune iro gore uye gare gare kugovana chinongedzo. Pazasi isu tinokuratidza kuti inoshanda sei nemuenzaniso unoshanda, wakatumira hombe faira kubva kune yedu iPad.
Maitiro ekutumira mafaera mahombe neMail Kudonha kubva kuiyo iPad, iPhone kana iPod Kubata
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa vhura iyo Mail app pane yedu iPad, iPhone kana iPod Kubata.
Dzvanya pa New message uye isu tinotanga kunyora iwo mavara anozoperekedza mafaira akasungirirwa.
Paunenge wagadzirwa, tinya pane isina chinhu nzvimbo kuti uwane iyo menyu iyo inotibvumidza kuisa mavhidhiyo kana mifananidzo iyo yatinoda kubatanidza.
Tevere, maforodha atakachengetera mavhidhiyo kana mapikicha atinoda kutumira netsamba anozoratidzwa. Isu tinovasarudza uye tinya pa Shandisa.
Nekudzvanya pakutumira, Tsamba inotizivisa izvozvo zvakabatanidzwa zvakakurisa kutumira neemail uye inotipa sarudzo yekushandisa Mail Kudonhedza iyo kuburikidza neICloud.
Dzvanya paDhivhosi Kudonhedza uye iye anogamuchira iyo email, iwe uchagamuchira email ine akati wandei ma link, zvinoenderana nenhamba yemafaira atatumira, kuti utore kurodha pasi zvakananga. Mafaira aya anowanikwa paICloud kwemazuva makumi matatu chete. Mushure menguva iyoyo vanozobviswa otomatiki. Ramba uchifunga kuti mafaera anofanirwa kuiswa kare kuICloud, saka maitiro aya haangoerekana aitika.
Imwe nzira inokurumidza uye enda kuseri sarudza mavhidhiyo ari mubvunzo uye ugogovana nawo kuburikidza neMail application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutumira makuru mafaera kuburikidza neMail Kudonha
Maitiro ekudzivirira sei dambudziko rekukanya iyo iPhone nezuva [Cydia]
Maitiro Ekuvhura Facebook Mutumwa Akavanzwa Chess